Isu takaedza iyo nyowani yePrintworks 2 application | Ndinobva mac
Mazuva mashoma apfuura iyo yechipiri vhezheni yePrintworks application yakasvika paMac App Store, zviri pachena kuti ndeipi zita rinonzi Printworks 2 yakatsaurirwa chete kune peji dhizaini uye yakawanda dhizaini kutsikisa kweMac.Muchiitiko ichi, iko kunyorera kunotipa yakanaka yakanaka yezvinhu zvitsva zvichienzaniswa neshanduro yapfuura.
Iyo yekutanga vhezheni yeichi chishandiso yave iri muMac application chitoro kubvira 2014 uye ichiri chishandiso chinoshanda kune avo vashandisi vakazvipira kugrafiki dhizaini. Zviripachena, iyo nyowani vhezheni inovandudza yapfuura, asi kuti kana kwete kutenga iyo nyowani zvinoenderana nemabatirwo aunoda kushandisa chishandiso uye kuti kana chichiita kana kwete icho chinoshanda mashandiro ayo yekutanga vhezheni ine nhasi.
Isu tatoziva kuti nyaya yekuvandudzwa inoshanda sei mumaapplication munguva pfupi yapfuura uye ndosaka kunyangwe iyo yekutanga vhezheni yePrintworks ichienderera ichishanda mushe, inotevera vhezheni iyo inowedzera kuvandudza inobhadharwa. Ose mafomu ari yakasarudzika yakasarudzika kune graphic vagadziri uye hatigone kuti iwo mapurogiramu anodhura.
Chii chitsva muPrintworks 2 vhezheni
Pamusoro pekuvandudzwa kweshanduro yemashandisirwo acho, zvimwe zvinhu zvitsva zvakakosha zvinowedzerwa kuti zvishande nayo uye mune tsananguro yekushandisa pachayo inotiratidza zvimwe.
Iyo itsva siginecha modhi inowedzerwa
Nyowani inogadziriswa grid
Rakagadziriswa mameseji bhokisi rinobatanidza
Mhando dzakasiyana dzemusoro uye kusanganisa neDepositphotos neGoogle Mepu
Inotaridza mayunifomu mumapanga uye mapikisheni, uye inowedzera rutsigiro rweMacs neTouch Bar
Neshanduro iyi nyowani, izvo zvinotarisirwa ndizvozvo Mugadziri ane dzimwe sarudzo dziripo paunenge uchigadzira yako yega graphic dhizaini. Kunatsiridza kunatsiridzwa kunowedzerwa kunoita kuti chishandiso ichi chive chinhu chinobatsira kwazvo kwavari. Iwe unogona kugadzira mabrochure, mapepa, makatalogu, matsamba, mamamenyu, tsamba dzakanyorwa, mapepa, makadhi, zvitambi, mahamvuropu, kwaziso, mafomu, makadhi, manotsi, uye mikana isingaperi yekugadzira.
Iko kunyorera kunowedzera anopfuura mazana mashanu akazara matemplate, zviuru zviviri zvemifananidzo zvakasanganiswa pamwe chete nemamwe makumi mana emakumi mana anowanikwa kuburikidza ne-in-app kutenga, anopfuura mazana manomwe ebhizinesi dhizaini dhizaini uye chitambi kubva kuAvery, Neato, Memorex nezvimwe zvakadaro. Tinogona zvakare kushanda nemazhinji ekugadzirisa maturusi nemarairidzi uye anogadziriswa dhizaini gridi, mabhodhi akadai se: QR kodhi, UPC-A / E, kodhi 40.000, EAN-700/39, ISBN uye mamwe kana maturusi maturusi ekugadzira mabhokisi akatwasuka uye akatenderera zvinyorwa, zvishoma zvemavara zvitaera kana zvigadziriso mumazita ane 8 uye 13D uye nezvimwe.
Zvirokwazvo vese avo vagadziri vanogona kutora mukana wekushandisa uyo wanga uchingowanikwa kwemazuva mashoma muMac App Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Isu takaedza iyo nyowani yePrintworks 2 app
MacOS High Sierra inotibvumidza kuti tione kana tichigovana ruzivo neApple kunatsiridza sisitimu